Dib-u-soo-nooleynta Bin data Recovery - [How to recover by 3 step]
Your location:Data recovery software>>so>Dib-u-soo-nooleynta Bin data Recovery
Dib-u-soo-nooleynta Bin data Recovery
Dib-u-soo-nooleynta Macluumaadka 'Recycle Bin Data Recovery
'pp Haddii aad si shil ah u faaruqiso Recycle Bin, sidee ayaad u soo celin kartaa xogta? Xaqiiqdii, xogta ku jirta qashinka dib-u-warshadayntu way lumaysaa, illaa inta habka saxda ah loo adeegsado, waa laga soo kaban karaa. Maanta, tifaftiraha ayaa soo bandhigaya seddex qaab oo si fudud loo isticmaali karo oo kaa caawin kara inaad si fudud ula soo baxdid xogta lumay sida tirtirka shilka iyo qashinka dib loo warshadeeyo. Ku saabsan dib-u-soo-nooleynta Xogta 'Recycle Bin Data Recovery'
Recycle Bin waa howlo wax ku ool ah oo ay bixiso nidaamka hawlgalka, u adeegsadayaasha si kumeelgaar ah u keydiya feylasha laga tirtiray diskka kombiyuutarka, sidaas darteed Isticmaalayaal badan ayaa isticmaali doona qashinka dib-u-warshadeynta, tusaale ahaan, waxay geliyaan xogta aan loo baahnayn qashinka dib-u-warshadaynta, waxay faaruqiyaan qashinka dib-u-warshadaynta, waxay tirtirayaan xogta dib-u-warshadaynta qashinka. Xogta la soo ceshan karo ma la soo kaban karaa ka dib qashinka qashinka dib loo warshadeeyo? Miyaa faylasha laga tirtiri karaa qashinka dib loo warshadeyn karaa? Xaqiiqdii, qashinka dib-u-warshadaynta ayaa la faaruqiyey ama xogta ayaa laga tirtirayaa qashinka dib-u-warshadaynta, xogtana lagama tirtirayo galka adag. Markuu nidaamku tirtiro feyl, wuxuu si fudud u tirtirayaa faylka qaab-dhismeedka oo wuxuu ku muujiyaa goobta diskiga ah ee xogguuradu inay tahay "bilaash". Sidan, feylasha la tirtiray kombiyuutarka mar dambe lagama arki karo, oo booska diskiga u dhigma ayaa la siidaayaa. Waqtigan, xogta la tirtiray ayaa weli ku jirta diskka adag, waxaana lagu soo ceshan karaa qaabab farsamo oo gaar ah. Si kastaba ha noqotee, markii xogta cusub la qoro, nidaamku wuxuu keydin karaa xogta aagga oo kaliya lagu calaamadeeyay "bilaash", isagoo markaas dib ugu qoraya xogta lumay. Xogta dib loo daabacay dib dambe looma soo kaban karo. Sidaa darteed, markii la ogaado in xogta ku jirta qashinka dib-u-warshadayntu ay lumaan, waxaa lagama maarmaan ah in laga fogaado dhammaan howlaha qorista inta ugu badan ee suurogal ah si loo hubiyo in macluumaadka lumay aan loo qaddarin doonin dhaawac labaad. Marka xigta, aan eegno hababka guud ee soo kabashada ee Xiaobian. Nidaamka dib-u-warshadaynta qashinka ee dib-u-soo-celinta hal: dib u soo celi faylalka kaydinta dib-u-warshadaynta
Xusuusin: Haddii dib-u-warshadaynta qashinka dib loo furay, markaa hawshani ma awoodi doonto inay soo ceshato wixii loo baahnaa Xogta, fadlan u gudub habka labaad oo iskuday inaad soo celiso xogta lumay ee ku jirtay qashinka qashinka. Tallaabada 1: Ka hel sumadda qashinka dib-u-warshadaynta desktop-ka, laba-guji icon si aad u furato qashinka dib-u-warshadaynta. Tallaabada 2: Raadi faylasha u baahan in lagu soo celiyo qashinka dib-u-warshadaynta. Haddii qashinka dib-u-warshadaynta aan la nadiifin muddo dheer, waxaa ku jiri doona xog badan, isla markaana waqti badan ayey qaadan doontaa in la helo xogta. Xaqiiqdii, xogta waxaad ku kala saari kartaa magac ahaan, nooca, cabirka, waqtiga tirtirka, goobta asalka ah, iwm, si aad u hesho xogta aad ugubaahantahay si fudud. Tallaabada 3: Soo celinta xogta. Xulo xogta laga soo celinayo qashinka dib loo warshadeeyo, ka dibna riix batoonka midigta ah, si aad u xulan karto ikhtiyaarka "soo celinta". Howlgalkan ka dib, xogta lumay waxaa lagu soo celin doonaa meeshii asalka ahayd kahor khasaaraha. Nidaamka dib-u-soo-nooleynta qashinka dib-u-soo-noqoshada
Nidaamka dib-u-soo-nooleynta xogta 2: Soo celinta xogta lumay ee kaydinta
Sababo la xiriira xogta Waxaa jira habab kala duwan oo gurmad ah, sidaa daraadeed tillaabooyinka gaarka ah ee loogu soo celiyo xogta kaydinta sidoo kale way kala duwan yihiin. Tusaale ahaan, haddii aad ku soo guurisay xogta kumbuyuutarrada kale ee adag marka aad kaydsanaysid xogta, ka dib u tag kaydinta oo raadinta xogta loo baahan yahay; haddii xogta lagu celiyo kombuyuutarka disk-ga, waxaad u baahan tahay inaad gasho akownka disk network. , Ka dibna soo degso nuqul xogta loo baahan yahay; haddii aad ku kaydiso xogta faylka sawir, waxaad u baahan tahay inaad ku socodsiiso barnaamijka kumbuyutarka ee loo adeegsado soo saarista xogta ku jirta sawirka. Haddii xogtu waligeed aan dib loo taageerin, ha ka welwelin, waxaad isku dayi kartaa habka seddexaad, wali waad badbaadin kartaa macluumaadka lumay qashinka dib-u-warshadaynta.
PreSidee looga soo kabanayaa feylasha laga tirtiray qashinka dib loo warshadeeyo?
NextSida loo soo celiyo feylasha laga tirtiray qashinka qashinka